Magaalooyin ka tirsan Britain oo lagu soo rogay ku dhaqanka shareecada islaamka – SBC
Magaalooyin ka tirsan Britain oo lagu soo rogay ku dhaqanka shareecada islaamka
Dadka ku dhaqan xaafado & degmooyin ka tirsan wadanka Britain ayaa ku soo baraarugay todobaadkan halku dhagyo dharaar cad lagu dhajiyey wadooyinka, gaar ahaan goobaha basaska laga raaco baalayaasha Telefoonada & calaamadaha lagu dhajiyo ee wadooyinka hareerahooda kuwaasi oo loogu sheegayo dadka deegaanka & socota in goobahaasi lagu soo rogay ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Arintan oo ay si weyn u hadal hayaan warbaahinta wadanka Britain ayaa waxaa ciwaano kala duwan lagu soo qoray wargeysyada iyadoo ay ka mid aheyd ciwaanadaasi.
“Magaalooyin ka tirsan Britain oo lagu soo rogay ku dhaqanka shareecada Islaamka”
“Muslimiinta ku dhaqan Britain oo qorsheynaya inay xoog u soo rogaan ku shareecada Islaamka”
“Islaamiyiin xagjiriin ah oo aasaasaya goobo lagu maamulo shareecada Islaamka”
“Mushkilad soo socota, Magaalooyin ka tirsan Britain oo lagu maamulayo shareecada”
“Jirka ganacsi maya, qamri cabid maya, qamaar maya, xagjiriin ka aasaaya nidaam Islaami ah magaalooyin ka tirsan Britain”.
Hadaladani waxay ahaayeen qoraalada & ciwaanada ay ku soo qoreen bogaga hore wargeysyada waa weyn ee laga akhristo wadanka Britain gaar ahaan England, waxaana arintan ka dambeysay ka dib markii koox muslimiin ah oo ka dhisan wadankan hase yeeshee la mamnuucay ay ku dhawaaqeen inay qaybiyaan 50 kun oo waraaqo ah oo ay ku sheegayaan in magaalooyin ka tirsan Britain ay ku soo rogayaan shareecada Islaamka.
Kooxdan oo lagu magacaabo Islam4UK ayaa goobaha ay ku dhawaaqeen inay ku soo rogeen shareecada Islaamka waxaa ka mid ah degmooyinka Waltham Forest, Tower Hamlets & Newham oo ka tirsan magaalada London gaar ahaan xaga Bari.
Kooxdan oo sidoo kale lagu magacaabo Muslimiinta ka soo horjeeda duulaanka waxay xaafadaha waraaqaha ay ka qaybiyeen ku sheegeen inay ka mamnuuc tahay haweenka jirkooda ka ganacsada, isticmaalka & iibka daroogada, sigaar dhuuqida, & waliba cabida Khamriga.
Sidoo kale degmooyinka & xaafadaha ay ka mid yihiin Luton, Beds, West Yorks, Bradford & Dewsbury ayaa ka mid ah meelaha sidoo kale kooxdan ay ku daadiyeen waraaqaha.
Website-ka kooxdan www.muslimsagainstcrusades.com waxaa lagu shaaciyey in maalinimada beri 30-ka July 2011 ay ku dhaqaaqi doonaan dibadbax balaaran oo ku aadan sidii ay ugu dhawaaqi lahaayeen dhismaha dawlad Islaami ah oo ka hirgasha wadanka Britain.
Waxaa sidoo kale lagu daabacay website-ka kooxdaasi in degmada Waltham Forest ay noqonayso degmadii ugu horeysya ee laga hirgaliyo ku dhaqanka shareecada islaamka, isla markaana ay hogaamin doonto ololaha ku dhaqanka shareecada islaamka.
Abu Izzadeen oo 36 sano jir ah deganna degmada Waltham Forest kana mid ah kooxdaasi ayaa sheegay in uu jeclaan lahaa in uu arko wadooyinka degmadaasi ooxdaasi ayaa sheegay in uu jeclaan lahaa in uu arko dadka sineysta oo dhagax lagu dilayo, haweenka oo lagu qasbo inay jirkooda asturtaan.
Degmada Waltham Forest oo ku taal waqooyiga Bari ee magaalada London waa deegaankaay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan Britain.
Abu Izzadeen oo horey u ahaa Kirishtaan balse qaatey diinta Islaamka ayaa yiri “Waxaan jeclaan lahaa in Waltham Forest ay noqoto imaarad Islaami ah, maxaa diidaya inay noqoto, waxaynu u baahanahay shareecada Islaamka”.
“Dhibaato badan ayaan qabnaa, waxaa nagu haya dhib haweenka jirkooda ka ganacsanaya, goobaha khamaarka lagu ciyaaro oo soo xoogeysanaya, wadooyinka waa weyn oo ay ragga & dumarki isku laban yihiin, tuugada waa in laga gooyaa gacmaha, dumarkuna waa inay jirkooda asturtaan, maalin uun waxaan rajeynaynaa in taasi dhacdo” ayuu hadalkiisa ku sii darey Abu Izzadeen.
Abu Izzadeen oo sanadkii 2008-dii lagu eedeeyey in uu dhaqaale u ururiyey wax lagu tilmaamay argagixisada isla markaana uu ka qayb galey dibadbax baalaran oo Muslimiinta loogu baaqayey in ay la jidaahadaan ciidamada Mareykanka ee sugan Ciraaq, wuxuu sheegay in uu ka hadli doono dibadbaxa beri ka dhici doona London.
Talaabada ay ku dhaqaaqeen kooxdan waxaa si weyn uga horyimid oo waraaqihii ay ku dhajiyeen darbiyada si deg deg ah ku fujiyey golayaasha deegaanada degmooyinkaasi, iyadoo dadka deegaanadaasi ay si weyn u dhaleeceeyeen go’aanka kooxaha Islam4UK & muslim Against Crusaders.
Link Video-ga hoose ka daawo taageerayaasha Islam4UK & muslim Against Crusaders oo dibadbax ay ku doonayaan ku dhaqanka shareecada Islaamka ka dhigaya wadooyinka magaalada London.>